Buddism | Ainmat.com - Myanmar Blog
Author : kyawkyaw2 - Friday, November 27. 2009
"ဂန္ဓာရီလမ်းသည် ဘာသာရေးလမ်းမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် လောကီအာရုံ များနှင့် မကင်းနိုင်ပါ"
Categories : Buddism , Comments :3Comments
Author : kyawkyaw2 - Thursday, November 12. 2009
Author : kyawkyaw2 - Wednesday, October 28. 2009
တစ်ခါတုန်းက အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နမော်နမဲ့နေတတ်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာကြုံလှီသေးကွေးတဲ့ ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးရှိသတဲ့၊ အဲဒီဘုရင်ကြီးမှာ တောင့်တင်းသန်မာလှတဲ့ မြင်းဖြူကြီး အထီး၊အမ တစ်စုံရှိတယ်။ ဘုရင်ကြီး တောကစားထွက်တဲ့ အခါ မြင်းထီးကြီးကိုစီး ပြီးထွက်လေ့ရှိ သတဲ့၊ အဲ တစ်နေ့
Author : kyawkyaw2 - Tuesday, October 20. 2009
အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ် ချီတက်အလေးပြုဖို့လာကြတဲ့လူအုပ်ကြီးကို ဦးဆောင်တဲ့လူကရှေ့ကနေ 'အာ ဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို အလေး......ပြု'လို့လည်း အမိန့်ပေးလိုက်ရော လူအုပ်ကြီးက တညီတညွတ်တည်း အလေးပြုလိုက်ကြ တယ်ဗျ၊ အဲ....သတ်မှတ်တဲ့ မိနစ်ပိုင်းလည်းစေ့ရော ဦးဆောင်တဲ့လူက 'နေမြဲ'လို့ တစ်ခွန်းတည်း အမိန့်ပေးရမယ့်အစား သူက - 'နေမြဲ၊ စားမြဲ၊ခိုမြဲ၊ ကပ်မြဲ ခါတိုင်းလိုပဲ ဆက်လုပ်ကြ' ဆိုပြီးအမိန့်ပေးသွားပုံကို
Author : kyawkyaw2 - Friday, October 9. 2009
"ငါ့ပတ္တမြားကြီး သူများတွေ လာလုလေမလား၊ ခိုးသွားလေမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းထားနေရချိန်မှာ အဖြစ်မှန်ကိုသိတဲ့ လူတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး 'စိုးရိမ်မနေပါနဲ့ဗျာ၊ ခင်ဗျားရဲ့ပတ္တမြားက အစစ်မဟုတ်ပါဘူး၊ အတုကြီးပါ၊ ဘာမှမက်လောက်စရာ မရှိပါ ဘူး'လို့ လာပြောရင် ..
Author : kyawkyaw2 - Friday, September 25. 2009